I-Canthelasma yokuSusa iKhilimu
Xanthelasma phantsi kwamehlo
I-Xanthelasma yamazwe amabini
I-Castor oyile yokuSusa iXanthelasma
Cholesterol Ubeka Unyango lweNdalo
Ukususwa kwamabala eCholesterol
Ukususwa kweeDipozithi zeCholesterol
Ukususwa kweenkophe zeCholesterol
Ngaphambi nasemva kweefoto
Ukukhupha i-Xanthelasma Cream
Apha siza kugubungela ukhetho oluthi ngamanye amaxesha lukhuthazwe ukususwa kweXanthelasma, njengegalikhi, ioyile ye-castor kunye nokunye. Ukuphazamiseka ngokupheleleyo kwezinto ezininzi onokukhetha kuzo.
Ukugubungela eyona micimbi iqhelekileyo kwezonyango enokuthi ibe ngumqobo ekubonakalisweni kweXanthelasma yakho. Ngaba uyazi, iingxaki zempilo zinokuba ziyinto yeXanthelasma yakho?
Apha siza kukunika konke ulwazi malunga nokuba yeyiphi iXanthelasma Palpebrarum eyona. I-lipid eqhelekileyo ukuphazamiseka, oku kunokuba luphawu lwezinto ezingaphantsi komba.
Ukukhupha i-Xanthel Cream
IXanthel yimeko yobugcisa unyango, yenzelwe ngokukodwa ukususa i-Xanthelasma yakho ngokulula nangokukhawulezayo. Unyango lwenzelwe wena kwiilebhu ze-EU, phantsi kwengqongqo kakhulu ulawulo lwemeko.
I-Xanthel ®-Iziphumo ezikhawulezayo nezilula nezinobuchule
Iyabiza kwaye ilula ukuyisebenzisa ngokuhambisa ngokukhululekileyo kumazwe aphesheya, yenza iXanthelasma yakho kunye neXanthomas ibe yinto yakudala.
IXanthelasma kunye neXanthomas zichaziwe
Qonda yonke into malunga neXanthomas kunye neXanthelasma
IXanthelasma zincinci 'iiplaques' yeXanthoma ehlanganisa amehlo akho. Yenziwe encinci iidiphozithi ezinamafutha kwaye uninzi lwexesha lisiphumo se-cholesterol eninzi.
Ixesha elininzi, iifotokopi zenzeka kuba unesifo seLipid. Ingaba ngumqondiso we Imicimbi yezempilo. Fumana uvavanyo lweprofayili ye-lipid kugqirha wakho Qiniseka.
I-intanethi ineentlobo ezahlukeneyo Unyango oluyimpumelelo lweXanthelasma. Uninzi lwazo luyakwazi yenza izinto zibe mbi kakhulu, kukwindawo yakho yokuqinisekisa ukuba yeyakho wazisiwe
Siphuhlise uXanthel ukuba nyanga ngokuthe ngqo kwaye ususe i-Xanthelasma yakho kunye neXanthomas. Xanthel uyiyo Yakhelwe ukususa amaphepha akho, khawuleza kwaye unesicelo esinye.
Ikrimu ye-Xanthoma yokuKhulisa
Iziphumo zeXanthel Ukususwa ngokulula
I-Castor oyile Ngaba iya kusebenza?
Ngaba iGarlic iya kusebenza?
IXanthelasma kunye neGarlic
Ukuya phantsi kwe-Knife
Unyango lwe-Xanthelasma Laser?
Ngaba ezi aziyongozi?
Ngaba le acid ye-mveliso ikhuselekile?
I-Electrolysis kunye neXanthomas
Iyabiza kwaye ilula ukuyisebenzisa ngokuhambisa ngokukhululekileyo kumazwe aphesheya, yenza i-Xanthelasma yakho ibe yinto yakudala.
Lahla iXanthelasma yakho kunye neXanthomas kube kanye ngeXanthel ®.
Joyina uluhlu olukhulayo lwabathengi abonwabileyo kwihlabathi liphela, abaye basebenzisa iXanthel kwaye baba yiXanthelasma kunye neXanthoma yasimahla.
Kubandakanya ukuhanjiswa simahla kwiLizwe liphela
Ubumnene kulusu lwakho
Inkxaso yokuthengisa emva kwentengiso
IHallts Yokuma kwePlaques
I-Xanthelasma kunye neZiphumo zeeMvavanyo ze-Xanthomas
Jonga ukuba abathengi bethu bathini malunga neXanthel.
“Ndikucebisile oku ngumntu osebenza naye. Wayenazo ezinkulu ezinkophe zakhe zeminyaka. Iguquliwe ukuba ilula, yisebenzise kube kanye kwaye baya. Ke ndiyithengile.
Ikhiti yafika ngokukhawuleza kwaye kwakulula kakhulu ukuyisebenzisa. Yisebenzise kanye kwaye wayishiya ukuze iphilise. Emva kokuba iphilisiwe, kwakungekho zibambi. Umsebenzi omninzi. ”
“Enjani yona imveliso! Ukuba uneXanthelasma, thenga oku kwaye baya kuba bemkile. Elula! Akuzange kube buhlungu xa ndiyifaka, ewe, ndiyavuma le ndawo ibincinci ibomvu ngelixa ipholile kodwa iXanthelasma yam ihambile. Into emangalisiweyo ngokwenene malunga nexabiso kunye nenyaniso yokuba ndiyisebenzise kube kanye, ukuba kunokuba lula kakhulu. Imveliso emangalisayo, iziphumo ezimangalisayo. "
“Ndizamile zonke iindlela zonyango zendalo abanye abantu abazicebisayo kwi-intanethi. Zama oku, kwiinyanga ezimbini kamva, akukho nto, baqala ukundibeka phantsi ukuze ndinyaniseke. Ndibuze kugqirha ngokubasusa njengoko babeqala ukuhla nam.
Ugqirha ucebise uXanthel. Unyanisile, kuyasebenza. ”
"Ikhrim yakho yokususa iXanthelasma ilungile. Ukujika ngokukhawuleza kwaye kwakulula ukuyisebenzisa. Kunqabile kakhulu ukuba uye kwiwebhusayithi esebenzela abathengi bayo kanye njengeqela lakho.
Enkosi ngokuphendula yonke imibuzo yam
Mnu S KIsham
”Imveliso elula kakhulu, andinakubulela ngokwaneleyo. Ndiyisebenzise kube kanye kwaye ngaphezulu kwiveki ezayo, ii-xanthomas endinazo zijikeleze amehlo am.
Akukho manqaku kulusu apho babefudula bekhona, sele behambile, ke ndinokubulela ngokwaneleyo. Nceda udlulise umbulelo wam kwiqela lakho lokukhathalela.
“Andazi enkosi ngokwaneleyo. Ekugqibeleni ubasusile 'kubo' emva kwebhetshi yangaphambili yemizamo yokusilela ngegalikhi. Ndinqwenela ukuba ndiye kuwe ekuqaleni xa iiplagi zam zenyuka.
Ndingacebisa ukusebenzisa le mveliso ukuba unexhala malunga neXanthelasma yakho. Yayidla ngokufika kwiingxaki zam ukuba wonke umntu uthe nje phila nabo. Uthenge i-cream yakho kwaye ungakhangeli ngasemva. Kulula ukuyisebenzisa. Ibiyingxaki, kodwa ngenxa yeqela lakho, andisenalo. ”
“Ndibuze ngotyando kodwa yayingaphaya kweedola ezingama-2000. Bendijonge kwityala elibizayo lokuhlinzwa. Uthenge iXanthel endaweni yoko kwaye ngoku iipapa zam zihambile kwaye ndonwabile ukuba ndiyifumene ikrimu yakho yokususa. Andinangxaki nokushiya uphononongo, kuba wenze imeko inzima yesikhumba, kulula ukuyisusa. ”
I-Kim Trim inkunzi
IXanthelasma kunye neCholesterol ephezulu
I-Xanthelasma kunye nesifo seswekile
I-Xanthelasma kunye nesifo sentliziyo
01. Ukususwa ngokulula ekhaya.
02. Ngaba lukhona unyango?
Ngaba ikhona into yokuNyanga le meko?
03. ngaphaya kwesibonakhulu.
Ngaba ukutya kunokutya?
IiVidiyo zoNcedo neeNgcebiso
Siza kukunika lonke ulwazi kunye nolwazi lweengcali ukuze nciphisa kwaye ususe iiplanethi zakho ngokulula nangokukhuselekileyo. Siza kuyigubungela Esona sizathu siphambili sokuba Ufumane iXanthelasma kunye neXanthoma, ungakuyeka njani ukusasazeka nento enokubonisa ngayo impilo yakho.
Izinketho zendlela yokwenza susa iXanthelasma yakho, enemifanekiso kunye neevidiyo zonke ezifakiwe. A Oovimba abaziingcali bobabini kunye noluntu ngokubanzi, ekugqibeleni a isisombululo esinye sokumisa kunyango lweXanthelasma kunye nokususwa.
Izikhalazo zolusu zinokuba yenye yezona zinto zibangela uxinzelelo kude kube ngoku umfanekiso wakho Ukuba unesifo iXanthelasma Palpebrarum ke uya kuba ulifumene kanye uhlobo loxinzelelo ukuba inkxalabo ulusu olunokubangela. Kwi-xanthel.com sinomdla wokunceda abaphethwe yiXanthelasma ngokunyusa ulwazi ngonobangela, uncedo ukuqonda kwindlela yokunyanga imeko kunye nokwandisa isiguli ulwazi olujikeleze iingozi okanye iingxaki ezinokubakho zeXanthelasma qhubelela kwi.
Xanthelasma yimeko yesikhumba edla ngokufumaneka kwiimbombo zakho iinkophe ezikufutshane nempumlo yakho. Ihlala ine-colouration etyheli kwaye nangona incinci kakhulu, abo bahlupheka yile meko bahlala beyenza Ukuzazi kakhulu ngayo. Ibonakala njengezikhala okanye amaqhuqhuva (kumakhonkco) ngaphezulu kwesikhumba, i-Xanthelasma eneneni ibangelwa kukufakwa kwamanqatha (lipids) ye-cholesterol engaphantsi komphandle wolusu. I-xanthoma iiseli zifunyanwa embindini nakwindawo ezingaphezulu ze-dermis nakwezinye Iimeko ezigqithisileyo zokusasazeka kweXanthelasma inokungena ngaphakathi kwezihlunu ulusu lwesikhumba. Inyani yile yokuba nangona kukho ezithile amaqela amancinci abantu abanokubandezeleka ngeXanthelasma, Nabani na unokufunyaniswa enaso. Oko kuthethiweyo, kungaphezulu Efumaneka rhoqo kubantu belifa laseAsia okanye iMeditera.
Ngaba iXanthelasma iyingozi?
IXanthelasma Palpebrarum ngokwayo ayisosongelo ngqo kuwe Impilo kwaye ayijongwa njengeyingozi ngoogqirha. Oogqirha benza njalo cebisa izigulana ukuba ziye kufuna uvavanyo lonyango ukuba bacinga njalo ineXanthelasma njengoko ihlala ibangelwa kukunyuka kwe-cholesterol ngaphakathi umzimba onokukhokelela kwezinye iingxaki zempilo kubandakanya isifo sentliziyo kwaye nokuthambeka ngakumbi ekuhlaselweni yintliziyo nasekubetha.
I-Xanthelasma Palpebrarum Icacisiwe
Omnye wemibuzo yokuqala abanayo le meko bahlala beyibuza yintoni ebangela iXanthelasma? Ngelixa kuyinyani ukwanda kwe Isixa se-cholesterol sinokubangela i-Xanthelasma inokuthi ifumaneke kwakhona abaguli abanamaqondo e-cholesterol aqhelekileyo okanye asezantsi. Sivame ukuva ngokulungileyo kunye ne-cholesterol embi. Ikholesteroli embi yaziwa ngokuba yi-LDL (ubuncinci-bubushushu lipoprotein). I-cholesterol elungileyo yaziwa ngokuba yi-HDL (uxinzelelo oluphezulu) lipoprotein). Amanqanaba asezantsi e-cholesterol ye-HDL inokuba sisizathu IXanthelasma njengamazinga aphezulu e-LDL cholesterol inokuba sisizathu. Ezinye izizathu zinokuba yi-hypercholesterolemia yentsapho exhaphakileyo ekubhekiswa kuyo njengelifa le-cholesterol ephezulu kunye nesifo sesibindi. Ukuhlala kunye IXanthelasma Palpebrarum ayifanele ikunike nakuphi na ukungaphatheki kakuhle emzimbeni imiqathango yemeko ngokwayo. Kuyinto enqabileyo kakhulu ukuba ibangele nayiphi na Uhlobo lokungaboni kakuhle kwaye ke ayifane ibekho into xa umbuzo wokukhupha uza.
Uninzi lwabantu luhlala kunye neXanthelasma ngaphandle kokukhathazeka okukhulu kwaye ubone nje luphawu lokukhula. Kuxhaphake kakhulu kubantu basetyhini kodwa banokuba ifunyenwe emadodeni kwaye ixhaphakileyo ukuba ifunyanwe kwiminyaka yobudala obuphakathi. Ukukhutshwa kweXanthelasma lukhetho olukhethwa ngabantu abathile kwaye lukhona ngokuqinisekileyo ayiqhelekanga - le webhsayithi iza kuthetha uninzi lwe I-Xanthelasma Palpebrarum yokhetho lonyango ngendlela enobuthathaka kunye eyona njongo yokukunceda ukuba ube nolwazi ngokwaneleyo malunga Xanthelasma. Nokuba unexhala malunga ne-biopsy yangaphambi kokuba isebenze okanye funa ulwazi ngakumbi ngendlela onokulawula ngayo amanqanaba akho e-lipid kuwo ikamva- siligubungele.
Kwizigulana ezininzi ziziphumo zezinye iingxaki zempilo okungakumbi malunga kwaye impilo yasemzimbeni yesigulana kufuneka ijongwa njengebaluleke ngokulinganayo njengempilo yengqondo ye isigulana. Sisebenzisa igama elithi impilo yengqondo njengefuthe lezengqondo naluphi na uhlobo lomcimbi wolusu olunokuba yingozi kumgangatho wobomi we Isigulana kunye neXanthelasma Palpebrarum ayifani kule meko.
Ugqirha olungileyo okanye iwebhusayithi enegunya njengeXanthel.com iya kukhokela ngokusebenzisa iindlela ezahlukeneyo zonyango zeXanthelasma kwaye yi umbono olungileyo lokufumana ukuqonda okuninzi malunga nemeko kangangoko kunokwenzeka Ngaphambi kokuba ubandakanye kwezi ngxoxo-oku kuya kukuvumela yenza isigqibo ngokusekwe kwiingcebiso nezikhokelo ezingenamkhethe ngokupheleleyo.
Xa kuziwa kunyango kukho inani lokukhetha elikhoyo nokususa kungafuneki kuxhomekeke kubungqingqwa be- IXanthelasma ohlangabezana nayo. Siza kugubungela yonke into ukusuka i-lipid yokunciphisa ukhetho lokunyanga ukususwa ngokupheleleyo kwe-Xanthelasma Palpebrarum ngaphakathi kwiwebhusayithi.
Ngokungafaniyo nezinye iimeko zesikhumba, iXanthelasma inenombolo ethile iindlela zokhetho ezikhoyo kwaye kuya kufuneka ukuba uqonde ngokupheleleyo Oku ngaphambi kokuba uthathe isigqibo malunga nokuba uyafuna na ukulandela unyango okanye inkqubo yokususa kwaye loluphi uhlobo ekufuneka uluthathe.
Ukufuna iingcebiso kwezonyango
Njengayo nayiphi na imeko yezonyango kufuneka ujonge ekufumaneni iingcebiso zobuchule kugqirha ozinikeleyo kwezonyango njengogqirha wakho. Ingcebiso ezifumaneka kule webhusayithi ziyakunceda ukuba uyazi ngokupheleleyo imeko yesikhumba kwaye inokukunceda ukuba uyaziqonda imeko yakho kodwa kubalulekile ukuba uchazwe ngokuchanekileyo u-100% kwaye kufuneka unikezwe ukhathalelo lwempilo.
Uya kufumana ubutyebi bolwazi kwi-intanethi malunga neXanthelasma Palpebrarum kwaye ngelixa uninzi lwayo luluncedo kakhulu kwaye lukhona, enye yayo aluchanekanga. Inani eliphambili lokuqala ukuba ucinga ukuba unayo imeko kukubhukisha kwaye ubone ukhathalelo lwakho lwenqanaba lokuqala isiqinisekiso seXanthelasma okanye iXanthomas- emva koku, sicebisa ukuba usebenzise eyethu iwebhusayithi njengesixhobo sakho esiphambili xa kuziwa ekuqondeni IXanthelasma; Ukufumanisa malunga nonyango olunokubakho lwemeko, Ukuqonda intsingiselo yokususwa kunye nokuba yintoni unobangela umngcipheko kwimpilo unokuba. Umzimba wakho kunye nempilo yakho (ngokwengqondo nangokomzimba) Kubalulekile kwaye wonke umntu wahlukile-ukwazi ngokupheleleyo ukuthanda kukunceda ukuba uthathe isigqibo esifanelekileyo kuwe kwaye iwebhusayithi yethu yiyo inyathelo lokuqala elifanelekileyo lokuqinisekisa ukuba uyi-100% eyazi ulusu lwakho imeko.
Thenga i-XANTHEL ngoku.
Sisebenze kwi-Xanthelasma kunye ne-xanthoma yokususa iMveliso iminyaka kwaye sinabasebenzi abanolwazi lokuthengisa ngaphambi kokulinda ukukunceda ngemibuzo kunye neempendulo kwiinkxalabo zakho malunga nale meko yolusu.
Ilungelo lokushicilela Xanthel ® Isayithi eyilwe ngu-Octopus Lab